ပဟေဠိ: အမှတ်တံဆိပ်ဂိမ်း | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » ပဟေဠိ: အမှတ်တံဆိပ်ဂိမ်း
ပဟေဠိ: အမှတ်တံဆိပ်ဂိမ်း APK ကို
သငျသညျလိုဂိုပဟေဠိ, trivia ဂိမ်းနဲ့တူပါသလား သင်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကုမ္ပဏီများသည်ကိုသိထင်ပါသလား? ပဟေဠိ: အမှတ်တံဆိပ်ဂိမ်းရုံသင်တို့အဘို့ပါ! သင်ရုံဘယ်လောက်သိသလဲထွက်ရှာပါ!
* လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှ 2285 အမှတ်တံဆိပ်ခန့်မှန်း
* အားလုံးအမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ်။ ဒါ့အပြင်ကနေဒါနှင့်များစွာသောပိုပြီး
ထူးခြားတဲ့အဆင့်ဆင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံ * ပြည့်စုံ 73
* သင်တလျှောက် play အဖြစ်တိုးမြှင့်အခက်အခဲနှင့်အတူ
* retro အဆငျ့ - အတိတ်ကုမ္ပဏီပုံရိပ်တွေသင့်ရဲ့အသိပညာစမ်းသပ်ရန်
* Google ကအတွက်စုဆောင်း 44 အောင်မြင်မှုများအားကစားပြိုင်ပွဲ Play
* အဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်ရန်6အေးမြထူးခြားတဲ့အရိပ်အမြွက်ကိုသုံးပါ
သင်လိုဂိုခန့်မှန်းတဲ့အခါမှာ * ပြည့်စုံရုပ်ပုံပေါ်လာသော
ဒီအသေးအဖွဲဂိမ်းထဲမှာသင်ကကားတွေ, ဖက်ရှင်, ရုပ်ရှင်နှင့်ဂိမ်းများအပါအဝင်သင်တို့ကိုချစ်တိုင်းအမှတ်တံဆိပ်အမျိုးအစားကိုရှာဖွေပေမည်။ ဒီလိုဂိုပဟေဠိ၌သင်တို့ကိုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကုမ္ပဏီများမှအဖြစ်အားလုံးအမေရိကန်ကုမ္ပဏီများကခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ သင်ချစ်သောကိုင်ထားတိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ခန့်မှန်းနိုင်ပါသလား?
ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏တံဆိပ်များကိုပြောင်းလဲအဖြစ်, ဒီမှာသင်အတိတ်ထဲကနေပြန်အများအပြား retro ပုံရိပ်တွေထံသို့လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောက်မက်ဘွယ် retro အဆင့်ကိုခံစားကြည့်ပါနဲ့အတိတ်ကုမ္ပဏီသင်္ကေတသို့သင့်ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်စမ်းသပ်ရန်။
ဒီဂိမ်းမှာပြထားတဲ့သို့မဟုတ်ကိုယ်စားပြုအားလုံးအမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်နှင့် / သို့မဟုတ်မိမိတို့၏သက်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်း၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်အချက်အလက်ဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်ဖော်ထုတ်ခြင်း၏အသုံးပြုမှုကိုအဘို့ဤအသေးအဖွဲ app ထဲမှာအနိမ့် resolution ကိုရုပ်တုဆင်းတုများအသုံးပြုမှုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရအဖြစ်တရားမျှတသောအသုံးပြုမှုအရည်အချင်းပြည့်မီ။
* အခမဲ့အရိပ်အမြွက်တိုင်း 15 မိနစ်
24.27 ကို MB
Omotayo ibukun ဧသတာ says:
နိုဝင်ဘာလ 5, 2017 မှာ 7: 07 ညနေ
လှပသော wow.this ။